Fiidiyowga Documentary -ga ee Dhismaha Dugsiga Sare ee Leslie Junior - Degmada Dugsiga Salem -Keizer 24J
Fiidiyowga Documentary Dhismaha Dugsiga Sare ee Leslie Junior
Fadlan la wadaag sawirrada, sheekooyinka iyo xusuusta gaagaaban ee waqtigaaga aad ku qaadatay Dugsiga Sare ee asalka ah ee Leslie Junior dhismaha ee Howard Street nala leh!
Waxaan sameyneynaa fiidiyow dokumenti ah waxaana lagugu casuumay inaad caawiso!
Hagaajinta maalgelinta dammaanadda iyo ballaarinta Dugsiga Sare ee South Salem waxaa ka mid ah in lagu beddelo dhismihii hore ee Dugsiga Sare ee Leslie Junior fasallo casri ah iyo goobo farshaxan oo lagu dhisi doono heer seismic ka sarreeya.
Dhismihii hore ee Dugsiga Sare ee Leslie Junior ayaa markii ugu horraysay la furay si loogu adeego ardayda sannadkii 1927. Sannadkii 1997 -kii, Dugsiga Dhexe ee hadda ee Leslie ayaa laga furay goobtiisa Pringle Road iyo dhismihii hore ee Leslie wuxuu ahaa hoyga Dugsiga Howard Street Charter ilaa 2019.
Tobannaankii sano ee la soo dhaafay, kumanaan ka tirsan beesheena ayaa soo maray hoolalka dhismihii hore ee Dugsiga Sare ee Leslie Junior, oo ay ku jiraan kuwo badan oo hadhow noqon doona hoggaamiyeyaal heer gobol iyo qaranba.
Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer waxay soo saarayaan a video documentary ah si loo xusuusto dhismihii hore ee Dugsiga Sare ee Leslie Junior, iyo waxay bulshada ku martiqaadeysaa inay soo gudbiyaan sawirrada, sheekooyinka iyo xusuusta gaagaaban ee waqtigooda ay ku qaateen dhismaha ama Barkadda Dabaasha ee Leslie. Ku -biirintaan waxaa loo tixgelin doonaa in lagu daro fiidiyaha dokumentiga ah.
Si aad ula wadaagto xusuustaada dhismaha sare ee Leslie Junior, fadlan isticmaal foomka hoose.
Soo gudbinta Xusuusta Leslie
Magacaaga (Baahan yahay)
Phone (Baahan yahay)
Fadlan bixi lambarka taleefankaaga haddii aan su'aalo qabno
Xusuustaada Sare ee Leslie Junior
Sawirada Old Leslie Junior Sare
Fadlan ku soo lifaaq sawirrada, ugu badnaan 8 MB midkiiba
Soo rar Sawirka 1:
Soo rar Sawirka 2:
Soo rar Sawirka 3:
Miyaad haysaa fiidiyow xusuusta Leslie?
Si aad u soo gudbiso muuqaal gaaban si loo tixgeliyo, fadlan ku dheji xiriirinta halkan:
Waxaan u oggolaaday degmadu inay magacayga ku darto dhibcaha fiidiyaha Leslie Memorial.
Copyright (Baahan yahay)
Markaan calaamadeeyo sanduuqan, waxaan qirayaa inaysan jirin wax xaddidaad xuquuqda daabacaadda ah oo ku saabsan sawirrada ama qoraalka aan halkan ku soo gudbinayo, waxaanna haystaa oggolaansho inaan kula wadaago Degmada Dugsiga Salem-Keizer. Waan fahamsanahay wax kasta oo aan soo gudbiyo in lagu dari karo fiidiyow documentary ah oo lala wadaagi karo dadweynaha.
Magdhow Maaliyadeed (Baahan yahay)
Markaan calaamadeeyo sanduuqan waxaan fahamsanahay inaanan heli doonin magdhow maaliyadeed oo aan ku darsaday fiidiyaha Leslie Memorial.
Miyaad jeceshahay inaad iska diiwaangeliso warsidaheena toddobaadlaha ah ee emaylka ee ku saabsan Dugsiyada Dadweynaha Salem-Keizer?
Haa, is -qor Maya mahadsanid
Haddii aad rabto inaad ku dirto agab boostada boostada, fadlan nuqullo u dir (fadlan ha soo dirin asalka maadaama aan la soo celin karin):
Mashruuca Xusuusta Leslie
Salem, ama 97305
Waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta Documentary -ga xusuusta Dugsiga Sare ee Leslie Junior!
Dhanka kale, haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid mashruucan, fadlan email noogu soo dir info@salkeiz.k12.or.us